LTV WORLD: LTV SHOW : ሕገ መንግስት ሳይሆን ህገ ሀገር ያስፈልገናል - Interview with Lencho Leta -
LTV WORLD: LTV SHOW : ሕገ መንግስት ሳይሆን ህገ ሀገር ያስፈልገናል – Interview with Lencho Leta
(SBO – Hagayya 08, 2019) Hidhattootni Affaar Godina Harargee Lixaa Ona Gumbii Bordoddee irratti dhukaasa banuun lammiiwwan Oromoo 7 ajjeesuun gariin madeessuu jiraattotnii fi maddeen adda addaa ibsaa jiran. Manneen ummataa gubachuunis dhaga’ameera.
Maammad Waaqoo Gurraachaa
Jawaar Ammadoo fi
Said Boruu kanneen ajjeesaman ta’uu fi
Mahaammad Waariyoo fi
Mahaammad Said Doobbaa kanneen jedhaman ammoo warra madaa’an keessatti akka argaman oduun media hawaasaa irra deemaa jiru ni ibsa.
Ajjechaa kana eenyuutu raawwate? Miidhaan dhaqqabe maal fakkaata kan jedhuu fi gaaffilee biroo jiraataa naannoo Huseen jedhamuu fi Bulchaa Ona Gumbii Bordoddee Obbo Abdulrahamaan SBOn bilbilaan dubbisee jiraa; kunoo ti.
Oduu #Injifannoo !!
Guyyaa kaleessaa Hagayya 7/2019 toora sa’a 9:00 keessa WBO’n waraaba kol.Abiyyii Gidina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii Ganda Laaloo Garee vakka addaa Laga Garee jedhamutti haxxee hidhuun loltoota hedduu irraan miidhaa hamaa du’aa fi madoo qaqqabsiisuun injifannoo boonsaa galmeessee milkiin ba’eera.Waraanni kol.Abiyyi kun naannoo kanatti qabeenyaa uummataa kan ta’e Hoolaa fi Reettii bakkee keessaa hatanii qalataa jiraachuu odeessi qabatamaan ni ibsa. Torban kana qofa naannoo Garjeedaa kanatti hoolaa fi reettii ja’a hatanii qalatanii jiru.
kanaas wbon gumaa fi beenya dachaan baasa jira
← Ethiopia and Eritrea’s peace must be rooted in past Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Lakkoofsa Kudha-tokkoffaa →